Frenkie De Jong Oo Saaxiibkiisa Ajax & Xulka Holland Ee Matthijs de Ligt Kula Taliyay In Uu Iska Diido Kooxaha Man United, Liverpool, PSG Iyo Juventus Iyo Kooxda Uu La Doonayo. - Gool24.Net
Frenkie De Jong Oo Saaxiibkiisa Ajax & Xulka Holland Ee Matthijs de Ligt Kula Taliyay In Uu Iska Diido Kooxaha Man United, Liverpool, PSG Iyo Juventus Iyo Kooxda Uu La Doonayo.
Frenkie De Jong iyo Matthijs de Ligt ayaa xalay xulka qarankooda Netherlands ugu soo wada bilawday kulankii UEFA Nations league waxayna ka caawiyeen in ay 3-1 ku garaaceen xulka England.
Matthijs de Ligt oo si wayn ay kooxaha Yurub ugu waa wayn isha ugu hayeen kulankii Netherlands iyo England ayaa qalad xun sameeyay wuxuuna Rashford ku galay qalad rekoodhe keenay laakiin waxa uu ku saxay goolkii barbaraha ee uu xulkiisa ciyaarta ugu soo celiyay.
Frenkie De Jong oo ay Matthijs de Ligt saaxiibo ku yihiin kooxda Ajax iyo xulkooda Netherlands ayay saxaafadu wax ka waydiisay mustaqbalka De Ligt wuxuuna De Jong tilmaamay kooxda uu saaxiibkiisa reer Holland la doonayo.
Waqtiga uu Matthijs de Ligt mustaqbalkiisa go’aanka kaga gaadhayo ayaa sii dheeraan doona maadaama oo uu xulkiisa u soo saaray finalka UEFA Nations league wuxuuna noqon doonaa axada iyo wixii ka danbeeya.
Frenkie De Jong ayaa cadeeyay in ay Matthijs de Ligt kawada hadlaan mustaqbalkiisa laakiin waxa uu cadeeyay in uu la doonayo sidii uu kooxda Barcelona ugula soo biiri lahaa isaga oo u muuqday in uu olole naftiisa ah ku jiro.
Kooxaha Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool iyo Juventus ayaa ka mid ah kooxaha Barcelona kula tartamaya saxiixa Matthijs de Ligt laakiin De Jong ayaa doonaya in uu doorto Barcelona.
Markii De Jong la waydiiyay in uu isku dayo sidii uu De Ligt ugu qancin lahaa in uu kooxda Barcelona kula soo biiro ayuu ku jawaabay: “Maya, isaga ayay waajib ku tahay in uu go’aankiisa gaadho. Dabcan waxaan jeclaan lahaa in isagu uu Barcelona yimaado, laakiin waynu arki doonaa waxa dhaca, isaga ayay u taalaa”.
Frenkie De Jong oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Anigu ma ogi (halka uu De Ligt ku biiri doono), waa go’aankiisa. waxaa waajib idinku ah in aad isaga fikradiisa waydiisaan, laakiin waxaan rajaynayaa in uu Barca yimaado”.
Laakiin De Jong ayaa qiray in ay ka wada hadlaan in uu Barcelona ku biirayo De Ligt wuxuuna yidhi: “Dabcan waanu ka hadlnaa (in De Ligt ku biiro Barca), aniga ima khusayso in aan wax ka sheego waxa uu isagu doonayo in uu sameeyo ama fikradiisa”.
“Anigu saamayn kuma lihi doorashadiisa. Isaga ayay waajib ku tahay in uu qoyskiisa la sameeyo go’aankiisa” ayuu De Jong hadalkiisa sii raaciyay.